Safiirka Jabuuti "Lacagtii Gurmadka Fatahaada Beledweyne 7 bilood ka hor ayaa bixinay" - Jowhar Somali Leader
Home Somali Safiirka Jabuuti “Lacagtii Gurmadka Fatahaada Beledweyne 7 bilood ka hor ayaa bixinay”
Safiirka Jabuuti “Lacagtii Gurmadka Fatahaada Beledweyne 7 bilood ka hor ayaa bixinay”
Safiirka Dowladda Jabuuti u fadhiya Soomaaliya Amb. Aadan Xasan Aadan (Balelo) ayaa shaaca ka qaaday in lacagtii ay ugu tala galeen Gurmadka Fatahaada Beledweyne ay bixiyeen 7 bilood ka hor, kaddib markii maalmo ka hor Guddiga Gurmadka fatahaadaha Beledweyne uu shaaciyay in aysan soo gaarin lacagtaas.
Safiirka oo wareysi siiyay laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa caddeeyay in lacagtaas oo aheyd Jeeg ay gacanta u geliyeen Wasiirka Gargaarka iyo Musiibooyinka oo ahaa Guddoomiyaha Guddiga Musiibooyinka ee dowladdu magacawday.
“Jamhuuriyadda Jabuuti waxay ku deeqday dhowr diyaarad qalab gurmad siday, qalab caafimaad iyo raashinka nafqada, waxaa jirtay Jeeg lacageed uu sii diray Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo ahaa lacag gaareysay $600,000 oo dollar, markii fatahaada Beledweyne dhacday sanadkii 2019, lacagtaas waxay qeyb ka aheyd gurmadka loo fidinayay fatahaada wabiyada”ayuu yiri Safiirka.
Sidoo kale Safiirka ayaa sheegay in wixii farsamo iyo maamul ay leedahay dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada, balse waajibaadka ay guteen uu ahaa wixii shacabka Jabuuti ay ku soo gurmadeen inay u dhiibaan dowladda Federaalka.
“Lacagtaas waxaa gacanta ugu ridnay Guddigii Musiibooyinka oo uu hoggaaminayay Wasiirak gargaarka iyo Musiibooyinka Xamza”ayuu yiri Safiirka dowladda Jabuuti u fadhiya Soomaaliya.
Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa shalay shaaciyay inay soo gaartay lacagtii dowladda Jabuuti ee gaareysay $600,000 iyo lacagtii dowladda Federaalka ku deeqday ee gaareysa $500,000, waxaana dad badan lama filaan ku noqotay in todobo bilood kaddib ay dowladdu lacagtii ay balan-qaaday iyo tii dowladda Jabuuti inay shalay un gaarto.
Guddiga Gurmadka Fatahaadda Beledweyne ayaa maalmo ka hor shaaca ka qaaday in aysan soo gaarin lacagtii dowladda Jabuuti ku deeqday ee loogu tala galay gurmadka fatahaadda iyo tii ay balan-qaaday dowladda Federaalka, waxaana ay durba dhalisay is weydiin badan oo ku aadan halka lacagtaas aaday.